ဆုံလည်ကြိတ်ခွဲစက် - China Turret ကြိတ်စက်ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ
၁၃၇၂ * ၃၃၀ မီလီမီတာစားပွဲတင်အရွယ်အလျားလိုက်အဆုံလည်ကြိတ်စက်က ၁၅၀ မီလီမီတာဗိုင်းငုံးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစက်
အမည်: အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ကြိတ်ခွဲခြင်း X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွားခြင်း - ၉၀၀ * ၃၈၀ * ၃၆၀ မီလီမီတာစားပွဲအရွယ်အစား - ၁၂၇၀ * ၂၅၄mm ဗိုင်းလိပ်တံ၏သွားလာမှု - ၁၂၇ မီလီမီတာနှုန်းစွမ်းအား - 3HP ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: R8 (NT30) အရွယ်အစား: 1720 * 1870 * 1670mm Net အလေးချိန် - ၁၅၀၀ ကီလိုဂရမ် ၁၂၇၀ * ၂၅၄ မီလီမီတာစားပွဲဝိုင်းထိုင်ဝမ်ကြိတ်ခွဲခေါင်းနှင့်အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ကြိတ်စက် ၁။ ထိုင်ဝမ်ကြိတ်ခေါင်းနှင့်ဘောလုံးဝက်အူ။ ၂။ တဝက်ကြမ်းတမ်းတိကျသောအပြောင်းအလဲအတွက်သင့်တော်သည်။ ၃။ လျှောက်လွှာ - အပ်ချုပ်စက်၊ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းဖိနပ်မှို၊ နာရီစသည်တို့။ ၄။ ဒေါင်လိုက်စက်ကိုရရှိရန်လွယ်ကူသည်။
R8 3HP RAM ဒေါင်လိုက်ဆုံလည်ကြိတ်စက်သတ္တုကြိတ်စက်ပျင်းစရာစက် 4PM
အရွယ်အစား: 1500 * 1700 * 2200mm ကြိတ်ခေါင်း: ထိုင်ဝမ်မူရင်းကြိတ်စက်၏ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: R8 (NT30) Rated ပါဝါ: 3HP အမည်: ကြိတ်စက်နှင့်ပျင်းစရာစက်စားပွဲတင်အရွယ်အစား: 1270 * 254 * 90mm X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွား: 900/370 / ၃၆၀ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် - ၁၄၀၀ ကီလိုဂရမ်မြင့်တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ပျင်းစရာစက် 4PM precision တိကျသောအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ optical စက်ပစ္စည်းများနှင့်အလိုအလျောက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊bပျင်းစရာ၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်းနှင့်အခြားမြင့်မားသောတည်နေရာအနေအထားအရွယ်အစားအတွက်သင့်လျော်သည်။
၁၃၅၂ * ၃၃၀ မီလီမီတာစားပွဲတင်အရွယ်အလျားလိုက်အလျားလိုက်စက်ကြိတ်စက်အား ၁၅၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံဖြင့်ပြုလုပ်သည်
စက်အမျိုးအစား: အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ခရီးသွားမှု - ၁၀၀၀ * ၄၀၀ * ၄၂၀ မီလီမီတာဇယားအရွယ်အစား - ၁၃၇၂ * ၃၃၀ မီလီမီတာ - ဗိုင်းလိပ်တံခံ - ၁၅၀ မီလီမီတာပါဝါ - ၅HP ဗိုင်းလိပ်တံခံနိုင်မှု - 0.002mm 1372 * 330mm ဇယားအလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ကြိတ်စက် 150mm ဗိုင်းလိပ်တံ QuroProduct အင်္ဂါရပ်များ 1. လျှောက်လွှာ: အပ်ချုပ်စက်၊ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းဖိနပ်မှိုများ၊ နာရီများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၂ ။ ၃။ ထိုင်ဝမ်ကြိတ်စက်ခေါင်းနှင့်ဘောလုံးဝက်အူ။ ၄။ ဒေါင်လိုက်ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ အလျားလိုက်ကြိတ်ခွဲစက်နှင့် ၄၅ ဒီဂရီကြိတ်ခွဲစက်နှင့်အတုံးကြိတ်ခွဲစက်များဖြစ်နိုင်သည်။
Universal 5HP စွမ်းအားသုံးသတ္တုကြိတ်ခွဲစက်အိပ်ယာဖွဲ့စည်းပုံ 1570 * 405mm Table Table
အရွယ်အစား: 2000 * 3050 * 2150mm Rated Power: 5HP မက်စ်။ ဗိုင်းလိပ်မှအဝေးသို့အကွာအဝေး ၇၆၀ မီလီမီတာအမည်: အိပ်ရာအမျိုးအစားစက်ကြိတ်စက်အရွယ်အစား: ၁၅၇၀ * ၄၀၅ မီလီမီတာ X / Y / Z ၀ င်ရိုး - ခရီးသွား - ၁၅၀၀ / ၃၅၅ / ၅၈၀mm ထိုင်ဝမ်ထိုင်ဝမ်ထိပ်တန်းတိကျသောအစိတ်အပိုင်းကြိတ်ခွဲစက်နှင့်ပျင်းစရာစက် B600L + အိပ်ရာကြိတ်စက်၊ စွမ်းဆောင်ရည် + ထိုင်ဝမ်မူရင်းတိကျသောကြိတ်ခွဲစက်၊ ဘောလုံးဝက်အူ၊ NSK P4 တိကျစွာဗိုင်းလိပ်တံ၊ ဗိုင်းလိပ်တံခံနိုင်မှု ၀ ၀ ၀၀၀၀ မီလီမီတာ။ + ပုဆိန်သုံးခုသည်တိကျသောဘောလုံးဝက်အူကိုအသုံးပြုသည်။
အရွယ်အစား: ၂၀၀၀ * ၂၂၃၀ * ၂၁၅၀ မီလီမီတာကြိတ်ခွဲထားသောခေါင်း - ထိုင်ဝမ်မူရင်းကြိတ်ခွဲစက်ဗုံတိုင်: NT40 အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ၇.၅HP မက်စ်။ ဗိုင်းလိပ်မှအဝေးသို့အကွာအဝေး ၇၆၀ မီလီမီတာအမည်: အိပ်ယာအမျိုးအစားကြိတ်စက်စက်အရွယ်အစား: ၁၃၇၀ * ၄၀၅ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း: ၁၀၀၀ / ၃၅၅ / ၅၂၀mm ထိုင်ဝမ်မူလကြိတ်ခွဲစက်နှင့်ပျင်းစရာစက်စက် B600SC 1. 7.5HP / NT40 Spinlde, ထိုင်ဝမ်မူရင်းတိကျမှု ကြိတ်ဆုံခေါင်း။ ၂ ။ ၃။ ဂျပန် NSK P4 တိကျစွာဗိုင်းလိပ်တံ၊ spindleto ...
သံမဏိစက်မှုသုံးကုတင်အမျိုးအစားကြိတ်စက် 1370 * 405mm Table မြင့်မားစွာတိကျသည်
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၁၃၇၀ * ၄၀၅ မီလီမီတာကြိတ်ခွဲထားသောခေါင်း - ထိုင်ဝမ်မူရင်းကြိတ်ခွဲစက် - ၀ င်ရိုးတန်း - ခရီးသွားလာခြင်း - NT40 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စွမ်းအား - ဗိုင်းလိပ်တံမှစက္ကန့်အထိဇယားအထိ - ၇၆၀ မီလီမီတာအမည် - ကုတင်အမျိုးအစားကြိတ်စက် ၅HP ကုတင်အမျိုးအစားကြိတ်စက် NT40 ဗိုင်းလိပ်တံ B600 ထိုင်ဝမ်မူရင်းကြိတ်ခွဲစက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ : အကြီးစားနှင့်အကြီးစားအလုပ်အပိုင်း (800-1000kgs) အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ 2. NSK P4 အ ၀ တ်အစားများကိုစက်၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အလုပ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ဗိုင်းလိပ်တံတွင်မွေးစားသည်။ ၃။ သံမဏိကိုယ်ထည်၊
NT40 / 5HP ဗိုင်းလိပ်တံဆုံလည်စက်ကြိတ်စက် Universal Bed Type Turret RAM ဒူးခေါင်းကြိတ်စက်
အရွယ်အစား: ၂၀၀၀ * ၂၂၃၀ * ၂၁၅၀ မီလီမီတာကြိတ်ခွဲစက် - ထိုင်ဝမ်မူရင်းကြိတ်ခွဲစက်ဗုံတိုင်: NT40 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းအား - 5HP မက်စ်။ ဗိုင်းလိပ်မှအဝေးသို့အကွာအဝေး ၇၆၀ မီလီမီတာအမည် - အိပ်ယာအမျိုးအစားကြိတ်စက်စက်အရွယ်အစား - ၁၃၇၀ * ၄၀၅ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း - ၁၀၀၀ / ၃၅၀ / ၆၄၀mm ထိုင်ဝမ် ဦး ခေါင်းကုတင်အမျိုးအစားမြင့်တိကျသောအစိတ်အပိုင်းကြိတ်ခွဲစက်နှင့်ပျင်းစရာစက် B600 ၁။ မိုးသည်းထန်စွာတွင်ကျယ်သည် နှင့်အကြီးစားအလုပ်အပိုင်း (800-1000kgs) အပြောင်းအလဲနဲ့။ 2. NSK P4 bearings များကိုစက်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ဗိုင်းလိပ်တံတွင်အသုံးပြုသည်။
ကောင်းမွန်သော Bearing Turret ကြိတ်စက်၊ Axis Ball သုံးဝက်အူအမျိုးအစားကြိတ်ခွဲစက်
ခရီးသွားခြင်း - ၁၀၀၀ * ၄၆၀ * ၅၂၀ မီလီမီတာဝက်အူ: ဘောလုံးအ ၀ င်စားပွဲအရွယ်အစား - ၁၃၇၀ * ၄၀၅ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ - ၁၄၀mm ပါဝါ - ၇.၅HP အမည် - အိပ်ဆေးအမျိုးအစား ၇.၅HP အိပ်ယာအမျိုးအစား ၃ လုံးပါဝင်သောစက်ကြိတ်ခွဲစက် B600SC ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များ။ မြင့်မားသောတိကျသောအစိတ်အပိုင်းများအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ပျင်းစရာ Mahcine ။ 2. အိပ်ရာအမျိုးအစား, meehanite သွန်း, မြင့်မားသောတင်းကျပ်ခြင်း, ကောင်းသော bearing bearing ထိုင်ဝမ်မူလတိကျသောကြိတ်ခွဲစက်၊ ဘောလုံးဝက်အူနှင့် NSK P4 တိကျသော bearing bearing ဗိုင်းလိပ်တံ: 0.002mm ။ 4. လေးလံသောနှင့် ... များအတွက်သင့်လျော်သော
အိပ်ယာအမျိုးအစားဆုံလည်ကြိတ်စက်, NT40 ဗိုင်းလိပ်တံဆုံလည် ဦး ခေါင်းကြိတ်စက်
အရွယ်အစား: ၂၀၀၀ * ၂၂၃၀ * ၂၁၅၀ မီလီမီတာကြိတ်ခွဲထားသောခေါင်း - ထိုင်ဝမ်မူရင်းကြိတ်ခွဲစက် - NT40 Rated Power: ဗိုင်းလိပ်တံမှစက္ကန့်အထိဇယားအထိအထိ - ၇၆၀ မီလီမီတာအမည် - ကုတင်အမျိုးအစားကြိတ်စက် ၅HP ကုတင်အမျိုးအစားကြိတ်စက် NT40 ဗိုင်းလိပ်တံ B600 ထိုင်ဝမ်မူရင်းကြိတ်ခွဲစက်အသေးစိတ်: ၁။ လေးလံ။ ကြီးမားသောအလုပ်အပိုင်း (၈၀၀-၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်) ပြုပြင်ခြင်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ 2. NSK P4 အ ၀ တ်အစားများကိုစက်၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အလုပ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ဗိုင်းလိပ်တံတွင်မွေးစားသည်။ 3. သံမဏိပြားများ၊ အတွင်းပိုင်းပျားလပို့များ ...
Axis ဒေါင်လိုက်ဗိုင်းလိပ်တံသုံးစက် 1370 * 405mm Table နှင့် 140mm Spindle Quill
စားပွဲတင်: ၁၃၇၀ * ၄၀၅ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် - ၂၉၀၀ ကီလိုဂရမ် Taper - NT40 ဗိုင်းလိပ်တံ - ဗိုင်းလိပ်မှသည်ထောင့်မှ ၁၄၀ မီလီမီတာအထိ - ၆၄၀ မီလီမီတာအမည် - ကုတင်အမျိုးအစားကြိတ်စက် B600SC NT40 ဗိုင်းလိပ်တံကုတင်အမျိုးအစား ၁၃၇၀ * ၄၀၅ မီလီမီတာဇယား ၁၄၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ - ကုမ္ပဏီများ: ၁ ။ စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်များ၏နှစ်ဆယ်သုံးနှစ်အတွေ့အကြုံကို။ 2. ISO9001 အခွင့်အာဏာနှင့်အတူအားလုံးမော်ဒယ်များအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၃ ။ ၄။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာအထောက်အပံ့ရှိသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့် ၅။ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်း ...
54 လက်မ Turret ကြိတ်စက်, အိပ်ရာအမျိုးအစားကြိတ်စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအကြီးစားအလုပ်များ
စားပွဲတင်: ၅၄ လက်မဝက်အူ: ဘောလုံးအ ၀ င်အပိုပစ္စည်းများ: အကြီးစားလုပ်ငန်းအပိုင်းအစများပြုပြင်သည့်ဗိုင်းလိပ်တံ - ဗိုင်းလိပ်မှ ၁၄၀၀ မီလီမီတာအမြင့်အထိ - ၆၄၀ မီလီမီတာအမည် - ကုတင်အမျိုးအစားကြိတ်စက် ၅၄ လက်မအိပ်ရာအမျိုးအစားစက်ကြိတ်ခွဲစက် B600SC အကြီးစားလုပ်ငန်းအပိုင်းအခြားများထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်များ။ မြင့်မားသောတိကျသောအစိတ်အပိုင်းများအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ပျင်းစရာ Mahcine ။ ၂။ တင်သွင်းထားသောဗိုင်းလိပ်တံကိုသုံးပါ။ အအေးခံခြင်းနှင့်အကြိမ်ရေအပြောင်းအလဲများပြီးနောက်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးတိကျမှုမြင့်မားသည်။ ထိုင်ဝမ်မူရင်းတိ ...